"Ii-agaves ezisithoba" iibhedi ezi-3 / ii-2 zokuhlambela ekhaya zilala 7
Uzakuhlala kwikhaya elihlala usapho kwidolophu yaseDover Gardens. Ngekhitshi eligcweleyo, indawo yokutyela kunye neyadi ekwabelwana ngayo ngasemva, kukho indawo eninzi. Igumbi lokulala eliphambili libandakanya igumbi lokuhlambela eline-en-suite, ngelixa igumbi lokuhlambela lesibini lisebenza amagumbi amabini okulala ngaphezulu. Qaphela ukuba ngasemva kwisakhiwo (kwisakhiwo esahlukileyo) yenye indawo ka-Airbnb, uza kubelana ngendlu yangasemva. Nceda uqinisekise ukuba imoto yakho ipakishwe kwicala lasekhohlo lendlu kwindlela yezitena ezibomvu.
Yonwabela ikhitshi entsha ene-smart induction cooktop kunye noluhlu oludityanisiweyo, indawo yokuhlala yangaphandle kunye negumbi lokuphumla elithokomeleyo. Ukufudumeza okukhutshiweyo kunye nokupholisa kwenza le ndawo ibe yindawo ekhululekile yokuhlala ixesha elide.
Unendawo yakho yepatio ene-bbq ecaleni kwendawo yokuhlala yangaphandle engabiwanga neendwendwe ngasemva.
Ibhedi yohambo, isitulo esiphakamileyo kunye nebhafu yomntwana ziyafumaneka xa uceliwe.
I-HDTV ene-I-Apple TV, I-Amazon Prime Video, I-Netflix
Kwiminyaka eyadlulayo le ndawo yayiyinxalenye yefama yobisi yasekhaya yosapho lakwaVinall- kwaye usenokuyifumana indlu yasefama namhlanje. Umhlaba wahlulwa waba yindawo yokuhlala. I-Bit of trivia - izitrato zonke zathiywa ngezalamane zomnini wepropati yokuqala. Isitrato sithe cwaka; abanye babahlali bokuqala basahlala apho kodwa iintsapho ezincinci ziyangena.
Siyafumaneka ngemiyalezo yakwa-Airbnb kwaye siyakuvuyela ukukunceda ucombulule naziphi na iingxaki kodwa asihlali eAdelaide okwangoku. Nceda uqhagamshelane nomququzeleli wethu uMelissa kwimeko kaxakeka kwiselfowuni 0407 700 654, ukude nemizuzu eli-15.
Ngaba uyi-arhente ebhukishayo egameni lomnye umntu? Ukuba kunjalo, sicebisa ‘i-Airbnb Yomsebenzi’ (https://www.airbnbforwork.com) ukuze yonke imiyalezo ibonakale kuwe nakundwendwe oluhlala nathi.
Siyafumaneka ngemiyalezo yakwa-Airbnb kwaye siyakuvuyela ukukunceda ucombulule naziphi na iingxaki kodwa asihlali eAdelaide okwangoku. Nceda uqhagamshelane nomququzeleli wethu uMel…